Abakhiqizi be-Industrial Iot Dtu / rtu - Abakhiqizi base China Industrial Iot Dtu / rtu & Factory
Imodyuli yokuxhumana yezimboni yokudlulisela okungenantambo kwe-DTU 4g module eshumekiwe
Isixazululo se-chipset se-7-mode chipset, esekela isoftware esebenzayo kanye nekhithi yokuthuthuka yesibili, izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zokusekelwa kwezobuchwepheshe.
Imodi engu-7 ephelele yeNetcom data transmission automation industry project multifunctional 4G RTU
Umklamo wesakhiwo sokuxhumeka kwesikhumulo, esikahle kakhulu ekusetshenzisweni kwemboni, ukwesekwa kweskripthi sokwakha, nakho kungaqoqa ngokuzenzakalela idatha kusuka kuzinsimbi nokudluliswa okusobala okubhidlizayo.
Isilinganiso esikude se-MDR2284 gprs / 4g nokulawula i-RTU yezimboni engenantambo nge-MQTT
Izimboni 4G i-RTU engenantambo
Ubuchwepheshe bokulinganisa nokulawula okungenantambo kwe-GPRS / 4G
Ukusekela i-Modbus master & isigqila / ukuvota / i-Local logic pulse trigger / i-Remmetry yesilawuli kude
Imodyuli yokuxhumana eyakhelwe ngaphakathi yezimboni nge-CPU ezimele
Ukusekela i-TCP / UDP / ModbusRTU / TCP / HTTP / MQTT
Ubuchwepheshe bokutholwa okuphezulu kakhulu
Ukusekela ishayela edluliselwe okukhipha
Ukwakhiwa kwesitimela / okwenziwe ngodonga
Ukubuka konke Imininingwane esheshayo Chipset: ZTE Model Number: MDD3421 Application: Automation industry data transmission Brand Name: MIND Place of Origin: Sichuan, China Type: Industry 4G network DTU Speed ​​rate: 1200-115200bps ...
Ukutholwa kwesiginali ye-analog yesiteshi engu-8 Ukucushwa kwepharamitha ye-Graphical 4G RTU
I-MDR2184 iyinombolo yokukala nokulawula okungenantambo (i-RTU) esebenzisa i-GPRS / 4G inethiwekhi engenantambo yokuthola inethiwekhi ukude nokutholwa kwesiginali yedijithali nokulawulwa kokulawula.
I-MDR2184 yisixazululo esisebenza ngayo yonke imali ngesisombululo se-GPRS / 4G sezimboni esakhelwe ngaphakathi kanye neprosesa egxilisiwe, eqonda ukutholwa kwedatha yasensimini / ukuhanjiswa kwedatha okungenantambo / irimothi.
RS232 / RS485 port serial to LTE wireless bidirectional transparent transmission 4G DTU
Umklamo wesakhiwo sokugcina izintambo ulungele imvelo yezimboni, isekela izinhlelo zeskripthi, ibona ukuqoqwa kwedatha okusebenzayo futhi inokudluliswa okusobala okumbili.
I-MDDR3411 isekela inethiwekhi kazwelonke ye-2/3 / 4G, ihlinzeka nge-RS232 / 485 egcwele isikhombimsebenzisi sokudlulisela esobala, okokufaka okungu-2 kokushintsha, okukhiphayo oku-2 okudluliselwe, isikhombimsebenzisi esisodwa sokukhishwa kwamandla ka-4V, umthetho olandelwayo we-modbus RTU, isekela ngokugcwele izicelo zokumiswa kwezimboni, i-Support TCP / UDP nezinye izivumelwano zokuxhumana zenethiwekhi, lo mkhiqizo usetshenziswe kabanzi ezinkambeni eziningi zokulinganisa nokulawula ezikude ezimbonini.
Isixhumanisi sokuxhumana okungenantambo nb iot industrial grade data data transmission terminal DTU
I-CoAP Protocol Yokusekela, i-China Telecom Cloud, i-NB-IoT,
I-LPWAN, isekela ukunikezwa kwamandla ebhetri yangaphandle
I-MDN311 NB-IoT DTU iwukugcina kwangaphandle okususelwa ku-NB-IoT yokudluliswa kwedatha okungenantambo, ivolumu encane, ukusekela izixhumi eziningi; ukusekela i-inthanethi, i-IDLE, isimo se-PSM, thola ukusetshenziswa kwamandla okuma okuphansi; Sekela umthetho olandelwayo wenethiwekhi ye-UDP / CoAP, uhlinzeka ngemodi yokudlulisela idatha esobala ngokuphelele kubasebenzisi; Sekela iphakethe lenhliziyo elenziwe ngokwezifiso, iphakethe lokubhalisa, unhlokweni; Sekela i-IoT Cloud yethu ezakhele yona ngaphandle kokwakha iseva ngabasebenzisi; Sekela ngokugcwele i-SCADA yezimboni, abasebenzisi akudingeki banakekele inqubo eyinkimbinkimbi yenethiwekhi, ngokugcwalisa okusobala okugcwele okucacile ungafinyelela ukuthumela nokwamukela idatha engenazintambo, okwenza idivayisi yakho ixhumeke kwi-Intanethi ngaphandle komkhawulo wesikhathi noma indawo.